Raha jerena ny toe-javatra manokana any Italia - The World March
Home » About us » Fifandraisana ofisialy » Raha jerena ny zava-misy manokana any Italia
Raha jerena ny zava-misy manokana any Italia
26 / 02 / 2020 25 / 02 / 2020 ny Antonio Gancedo
Serasera avy amin'ny ekipa Promoter italiana ho an'ny toe-javatra manokana any Italia noho ny fisian'ny Coronavirus
Ny ekipa Promoter an'ny Italiana maneran-tany faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana maneho, voalohany, manome fisaorana sy fifamatorana amin'ireo niharam-boina tamin'ny Virus virus COVID 19 manerantany ary indrindra ao Italia.
Ny loza maika nateraky ny fitomboan'ny raharaha eto amin'ny firenentsika sy ny fepetra mifanaraka amin'izany dia nanery ny fanovana amin'ny fomba radikan'ny hetsika efa nomanina mba handalovana ny Martsa izao ho an'i Italia, voatondro ny 26 Febroary ka hatramin'ny 3 martsa.
Ny toe-pahasalamana samihafa ao amin'ny firenena dia nanolotra vahaolana samihafa, na izany aza, ny mety hisian'ny fiovana mitranga isan'ora.
Ny fandaharan'asa manan-karena dia novaina arakaraka ny toe-javatra sy ny toetoetran'ny manampahefana.
Ny mpandehin'ny ekipa fototra dia ho afaka handray anjara amin'ny horonantsary amin'ny hetsika eo an-toerana izay mijanona ho mijoro.
Ny fandaharana manokana dia hampitaina ny komity misahana ny fampiroboroboana ao an-tanàna.
Ny ekipa Promoter an'ny Italiana dia manantena fa hiverina haingana eo amin'ny ara-dalàna ary mieritreritra fa hisy volana martsa italiana ho vita amin'ny volana ho avy, izay misy ny hetsika tsy mbola tanteraka tamin'ity fotoan-dehibe ity sy ny maro hafa izay ho mariky ny fandriampahalemana, tsy fahatomombanana sy fifaliana.
Ekipa Promoteran'ny Italiana ho an'ny Diabe Erantany ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana
Sokajy Fifandraisana ofisialy Ticket navigation
Teo anelanelan'ny Trieste sy i Umago ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatoniana
Handray ny volana martsa ny "Agro Romano"